Home Wararka Qarax ismiidaamin oo lagula eegtay dad salaad subax ku tuganaayo masjid
Qarax ismiidaamin oo lagula eegtay dad salaad subax ku tuganaayo masjid
Wararka ka imaanaya dalka Nigeria waxay sheegayaan in qarax ismiidaamin ah lala beegsaday dad salaadda subaxa ku tukanayay misaajid ku yaal dalka Nigeria.
Qaraxan ayaa ka dhacay magaalada Gwoza oo ku taal gobolka waqooyiga bari dhaca ee Borno subaxnimadii Axadda aheyd.
Warbaahinta gudaha ayaa ku warrantay in 3 qof oo ku tukaanayay misaajidka ay ku dhinteen qaxara halka warar kalena ay sheegayaan in mid kamid ah kuwii weerarka soo qaaday uu ku dhintay halkaas.
Balse ma jiraan ilo rasmi ah oo xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Ilo wareedyo ku sugan deegaankaas ayaa BBC u sheegay in labo carruur ah ay ismiidaamiyeen isla markaasna ay bartilmaameedsadeen dad salaadda subaxa ku tukanayay misaajidkaas.
Waxay dhankooda sheegeen in qaraxa uu ku dhintay canug yar halka tiro dad ah ay ku dhaawacmeen.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay weerarkan balse maleeshiyaadka Booko Xaraam iyo dagaalyahanno taabacsan ururka la magac baxay Dowladda Islaamka ayaa weerarro u geystay gobolkaas.